Holm Fibre – Progress tatitra! | Holmbygden.se
Holm Fibre – Progress tatitra!
Posted on 28 Oktobra, 2014 ny Holmbygden.se
Rehefa afaka fotoana “radioskugga” isika in Holm Fibre Economic Association indray miaraka amin'ny fanazavana ny fomba tokony hiasa amin'ny haingam-pandeha ho any amin'ny vondrom-paritra.
Tsy maintsy manomboka amin'ny alalan'ny fiarahabana Lalina Sodina Sandnäset sy Loviken izay dia nanana fahafahana hanatevin-daharana ny fikambanana fibre East Bracke. Misy sady efa amin'ny nandavaka sy ny fametrahana fitaovana lasa izay hanao ny fananany ary hifandray ny fifandraisana. Ny vokatry ny mazava ho azy fa vitsy ankehitriny isika mpikambana fa mahita tsy olana izany, fa ny fikambanana dia mbola tena lehibe fa afaka hanatanteraka ny fanorenana ny tambajotra raha mandray fanomezana.
Efa nanana fitiavana avy momba ny rafitra mpamatsy fa nanorina ny tambajotra. Efa nanapa-kevitra ny hampiasa ny Bynet izay manana traikefa be dia be ny trano tambajotra any ambanivohitra any an-dalana ataontsika. Isika koa ny fanahy momba ny fomba fifandraisana mpanome izany hoe ireo izay mitantana ny tambajotra sy manampy ireo mpanome tolotra mba hampitombo ny vokatra ho antsika. Tsy izahay mbola tsy nanapa-kevitra, fa manana kandidà feno roa azo isafidianana.
Amin'izao fotoana izao, dia manana 173 mpikambana ao izay tsy nandoa ny fandraisany anjarany taona sy izay tokony ho isaina ho toy ny mpikambana. Mbola mety tompon'ny fananana dia afaka hiaraka ary faly miaraka amin'ny mpiara-monina sy ny fiantraikany bebe kokoa ny olona mba hanatevin-daharana ny hoavy ho an'ny tanindrazany.
Map ny fikambanana ny mpikambana sy ny fananana, ary koa ny mety ho mpanjifa!
tsindrio eo amin'ny “zanabolana” hizaha ny trano. Ny sarintany dia havaozina hatrany. Se fullsstor karta.
OBS! Mba hanampy antsika mba hiezaka hanana mpanjifa amin'ny manga- ary ny trano miloko mavo.
Nandritra ny lafiny farany 2014 ny fangatahana dia atolotra ny Biraon'ny County ho amin'ny anie fangatahana fanorenana. Fanapahan-kevitra amin'ny Grants dia mifototra amin'ny fanazavana avy eo amin'ny lafiny voalohany 2015. Izany dia tokony aseho amin'ny ny fampiharana, anisan'izany ny fomba maro ny olona no handeha mifandray amin'ny harato sy izay ny isa izany no fototry ny ny habe. Rehefa nametraka ny fampiharana dia tsy ny isan'ny mpikambana mpanorina izay mpandray anjara bebe kokoa. Plus fananana taorian'ny anie dia nanapa-kevitra izy ireo, dia mazava ho azy ho afaka ny hiaraka fa ho vokany eo amin'ny fananana fanampiny dia tsy maintsy mandoa lafo kokoa ny fifandraisana, satria isika dia tsy ho afaka ho ireo. Inona no lehibe ny fitomboan'ny vola dia ho dia hiverina any aoriana. Mba tsy vivery sitraky hisoratra anarana haingana araka izay azo atao, ary mandoa ny taona maha-mpikambana ary mba miaraka. Arakaraka ny miaraka ny mora vidy kokoa, fifandraisana rehetra.
Raha vantany vao vonona ny hanome ny zavatra rehetra fanapahan-kevitra, sns, dia rehetra hatolotra ho mpikambana izay dia ireo izay manapa-kevitra ara-dalàna izany rehefa manorina Network.
Isika avy amin'ny Birao mandray ny asa vita, ary koa mandray ny fanantenana ho an'ny fananganana ny fibre Network.
Fa ny Board ny
Holm Fibre tranonkala amin'ny fanazavana fanampiny sy ny lahatsoratra: Holmbygden.se/holmfiber